Facebook ရဲ့အသစ်တိုးလာတဲ့ "Trusted Contacts" ဆိုတာ ~ IT Guide Myanmar
Facebook ရဲ့အသစ်တိုးလာတဲ့ "Trusted Contacts" ဆိုတာ
12:53 AM No comments
Posted: 13 Jun 2013 03:18 AM PDT
Facebook ကအကောင့် လော့ကျသွားတဲ့ အခါ ကိုယ်အယုံကြည်ဆုံး၊ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်အကောင့်ကို ပြန်ရအောင် လုပ်ပေးမယ့် "Trusted Contacts" ဆိုတဲ့ feature ကိုထပ်တိုး လိုက်ပါပြီ။
Facebook ကကိုယ့် Account Security ကိုကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ လက်ထဲကို ထည့်ပေး လိုက်ပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့ Account လော့ကျ သွားတဲ့အခါ ကိုယ်အယုံဆုံး၊ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း တွေက Account ကိုပြန်ရအောင် လုပ်ပေး နိုင်တော့မှာပါ။
ဒီနေ့မှာပဲ Facebook က "Trusted Contacts" လို့ခေါ်တဲ့ လုံခြုံရေး Feature တစ်ခုကို ထပ်တိုး လိုက်ပါပြီ။ ဒီ Feature ကအခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း တွေဆီက အကူအညီနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Passwords တွေကို ပြန်ပြင်လို့ ရအောင် လုပ်ဆောင် ပေးမှာပါ။ ဒီ Feature ကအသစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၁တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ Trusted Friends ကိုပြန်လည် ဆန်းသစ် ထားတာ ဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ပေး တော့မှာပါ။ နောက်ပိုင်း Facebook ကိုဝင်တဲ့အခါမှာ ပြဿနာ တက်နေရင်ဒီ Trusted Contacts ထဲမှာ ကိုယ်အယုံကြည်ဆုံး သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ကနေ ငါးယောက် အထိကို ရွေးထား ပြီးတော့ သူတို့တွေက ကိုယ့်ရဲ့ အကောင့်ကို ပြန်ရအောင် ကူညီပေး မှာပါ။
Lock ကျ သွားတဲ့ အခါမျိုး တွေမှာ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေဆီကို Security Codes တွေကို ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး သူတို့တွေက ကိုယ့်ဆီကို အဲ့ Security Codes တွေပြန်ပို့ ပေးရမှာပါ။ ကိုယ့်အကောင့်ကို ပြန်ရဖို့ အတွက် Codes စုစုပေါင်း ၃ခု လိုပါမယ်။ ဒါတင်မက Trusted Contacts ကိုသုံးတာကြောင့် အရင်လို ကိုယ့်ရဲ့ Security Question တွေရဲ့ အဖြေကို မှတ်ထားစရာ မလိုတော့တဲ့ အပြင် ကိုယ်ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဆိုတာ သက်သေ ပြရတဲ့ ဖောင်အရှည်ကြီး တွေလည်း ဖြေပေးစရာ မလိုတော့ ပါဘူးလို့ Facebook ကဆိုပါတယ်..
On your Facebook profile Go To – Settings.
Choose Security Settings and then ‘Trusted Contacts’.
Click on ‘Choose Trusted Contacts’ and going forward you can add 3-5 friends whom you trust can help you in need.
ဒီ feature ကိုသုံးမယ် ဆိုရင် security settings ထဲသွားပြီး ကိုယ်ယုံကြည် ရတဲ့ သူတွေကို ရွေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီကို notifications လေးတွေ ပို့ပြီး အကြောင်းကြား ပေးပါလိမ့်မယ်။ Facebook ကအမှန်တကယ် ယုံကြည်ရတဲ့ သူတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ပါ ဆိုပြီး သတိပေး ထားပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်သော့ အပိုတွေကို ပွားပေးထား ရတာနဲ့ ဆင်တူပြီး လော့ကျ သွားတဲ့အခါ သူတို့ဆီက ကိုယ့်သော့ကို ပြန်တောင်း ရတာမျိုးပါ။ ဒီလုံခြုံရေး စနစ် အသစ်က ကြည့်ရတာ ထူးဆန်းပေမယ့် ခုခေတ်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ လုံလုံခြုံခြုံ ကိုယ့်အကောင့်ကို ပြန်ရအောင် လုပ်ဆောင် ပေးထား ပါတယ်။ ဒီပုံစံ အသစ်ကို မကြိုက်တဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အရင်ပုံစံ security questions တွေဖြေ တာကို ပြန်သုံးလို့ ရပါတယ်။
Credit to: MYMC
ညီနေမင်း Lesson 2-1 How to remove Programs From your PC Lesson (2) User Account ဖြင့် ကွန်ပျူတာသုံးစွဲမှု့အား ထိန်းချုပ်ခြင်း Window xp, 7, 8...
How to Root Samsung Galaxy Ace Plus (GT-S7500)
APK တွေကို Virtuous Ten Studio နဲ့ပြင်ဆင်ခြင်း
2012 Xperia Devices တွေအတွက် Firmware များ စုစည်းမ...
Huawei All In One Recovery Flashing Tool (Latset V...
Y210T Root & Wifi Error ရှင်းနည်း
ZawGyi Font Installer (Root လုပ်ပြီးသောဖုန်းများနှ...
All In One Unlock Bootloader Tool Kit
All In One HTC Recovery Flashing Tool (Version 1.0...
U8661 One Click Root & Zawgyi Font + Frozenkeyboar...
G510-0010,Y300,C8813 Easy Root Tool Kit
Huawei All In One Recovery v1.5 Release Here !!!!
All In One Samsung Recovery v1.0
Mydroid Tool v1.2
မြန်မာဖောင့် မလို (root လုပ်စရာမလိုတဲ့ facebook) v...
Boot Animation Changer v0.2 (Beta)
Y210,Y210C,Y210S အားလုံးကို One Click နဲ့ Root,မြန...
Y210 Series တွေကို Recovery ကနေ Root,မြန်မာစာ,လက်က...
Myanmar Font Installer v1.0 Beta
Facebook Account ကို Confirm Code မတောင်းအောင်ဖွင်...
How to create main menu – blogspot (blogger)
How to makeablogger website
ဖုန်းအချင်း ဖိုင်ပို့သူတွေအတွက် bluetooth ထက် ၁၀-ဆ...
How to Root the Sony Xperia GO
နောက်ဆုံးထွက် နာမည်ကြီးရုပ်ရှင် HD ဇာတ်ကားတွေကြည့်...
[Android] Downloads links for USB (adb and fastboo...
iMediaShare (5.0) Full APK For Android
Google Play နဲ့ Amazon က ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ App တွေ...
Time Magazine ရဲ့ Buddhist Terror ကို Online မှာ လ...
Blogger ဘ၀ နှင့် စေတနာ
Android ဖုန်းဘက်ထရီ အကုန်မြန်သူများအတွက် 2ဆတိုးအော...
Firefox တစ်ခုလုံးကိုမြန်မာလိုအသုံးပြုလို့ရပြီ (ယူန...
Sony ဖုန်းများတွင် external မန်မိုရီိကို Internal ...
Earth HD Deluxe Edition 3.1.6 For Android
Android ဖုန်းများအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် Driver အချို့စ...
ကွန်ပျူတာဝေါဟာရအခေါ်အဝေါ်များအတွက် သီးသန့်ထုတ် အာသော...
FontLab Studio v5.2.1.4836 + crack
WinRAR 5.00 Beta3(x86/x64) + keygen
cFosSpeed 9.05 Build 2061 Beta + trial reset
novaPDF Professional Desktop 7.7 Build 391 Multili...
WebcamMax 7.7.4.2 + keygen
Mobile နည်းပညာလေးတွေကို ဒီမှာစုစည်းထားတယ်
မိမိ ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Web Site,Blog တွေ စီးပွားရေးကြေ...
HTC ဖုန်းများ Root မလုပ်ပဲ Zaw Gyi Font သွင်းနည်း
Teorex Inpaint 5.2 Latest Full version with crack ...
Ashampoo Slideshow Studio HD 2.0.6.2 full with reg...
Dhamma Droid apk
Android version 4.0 နှင့်အထက် ဖုန်းများမှာ မြန်မာစ...
Samsung phone များတွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖေ...
ArcSoft Portrait+ 2.1.1.185 Full with Patch
arcsoft perfect 365.1.8.0.3 full with key
onOne Perfect Photo Suite7Premium Edition full w...
How To Install Window7with USB Stick
ESET NOD32 Antivirus v7.0.28.0 (32 & 64bit) + Acti...
Facebook မှာ ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းစာရင်းကို ဖွက်ထား...
ကွန်ပျုတာမှာ သီချင်းတွေ ဘညာသာရကာ ကူးတာနှေးရင် မြန်...
Whell of Fortune ( မြန်​မာ့လက်​​ထောက်​​ဗေဒင်​ )
Internet Download Manager 6.16 Build 1 Final With ...
Premium Account မသုံးဘဲ MiPony 1.6.3 Portable နဲ့ ...
လူကြိုက်များပြီး တကယ် အသုံးဝင်တဲ့ ANDROID APP လေးေ...
ကိုယ့်ဖုန်းထဲကနေ တစ်ခြားဖုန်းထဲက ph call, misss ca...
Google Play က Apk တွေကို PC ကတဆင့် ရအောင် ဒေါင်းချ...
Winrar Crack for Version 4.20
နာမည်ကြီး Brand မျိုးစုံကို Root နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Ro...
Driver ပေါင်း သိန်း 20 အထက်ပါဝင်တဲ့ Driver Navigat...
Google Chrome Browser နဲ့ Firefox Browser တွေမှ...
Shweyoe Dictionary Version 3.0 (Windows) [Updated]...
Facebook မှာ နှိပ်စရာမလိုပဲ မောက်(စ်) လေးထောက်ယုံန...
ဒီဇိုင်နာများအတွက် Font Viewer 2.0